Puntland iyo ganacsiga siyaasadda: Yaa xildhibaan kuu ah, yaa se wata musharraxa Madaxweyne? (dhegayso/daawo) – Radio Daljir
Noofember 20, 2018 5:15 g 0
Dadku horta waddaniyiin ma yihiin? Dalkooda iyo dadkooda ma jecelyihiin oo ma u dhimanayaan?Xildhibaanada Puntland maxay dadka kale kaga duwanyihiin? Dalkooda ma ka war hayaan? Dadkooda ma ka war hayaan? Kuwa isticmaala ma yaqaaniin? Sida loo isticmaalo ma ka war hayaan? Sida loo isticmaali doono war ma ka hayaan? Ayagu ma iska warqabanaan? Adigu ma ka warqabtaa?
Musharraxa u sharraxan Madaxweyne Puntland asaga ma ka warqabtaa? Warkiisa ma haysaa? Waxa uu dadka iyo dalka la rabo dhegta weli ma u raaricisay. Qof ahaantiisa iyo dad la dhaqankiisa se?
Waa qaybtii labaad ee riwaayadda Puntland iyo ganacsiga siyaasadda .
Hoos ka dhegayso oo Daljir kala soco …
Siyaasadda & Dhaqaalaha 398 Wararka 12858